Nevada Asset Protection Trust, onye ọka iwu na ụgwọ
Kedu ihe bụ Nevada Asset Protection Trust?
Nevada ntụkwasị obi akụ bara uru tụkwasịrị obi na-efu ego ya. Nke a pụtara na ị nwere ike idozi ntụkwasị obi yana irite uru na akụ ahụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịme ma nwee nchedo site na ndị na-akwụ ụgwọ n'ọdịnihu ma ọ bụ ndị ikpe. Ozugbo ị bufere akụ n'ime Nevada Protection Trust, afọ abụọ gafere, ntụkwasị obi na-echebe akụ na ụba gị n'aka ndị nwere ụgwọ. Ọ bụrụ na ibipụta ihe nnabata ahụ na ntụkwasị obi, na akwụkwọ akụkọ Nevada, dịka ọmụmaatụ, ọ na-ebelata oge ahụ ruo ọnwa isii. Yabụ, mgbe iwu nke njedebe na njedebe, ntụkwasị obi kpochiri akụ gị n'ime. Yabụ, ndị akwụ ụgwọ gị enweghị ike iru ha iji mezuo ikpe.
Enwere oke ike maka ndị ahịa ịtụkwasị obi; ọ bụrụhaala na ị kwadoghị ntụkwasị obi ị ghọgbuo ndị ji ụgwọ a ma ama wee mezuo usoro ndị dị mfe, iwu nchekwa Nevada nwere ike ịnye gị uru nchekwa nchebe bara uru. Ọ dịkarịa ala otu onye na-elekọta ụlọ ga-abụ onye bi na Nevada onye na-ahụ maka ịdebe ndekọ ntụkwasị obi, na-edebanye ihe ụtụ isi. Onye ọ bụla nọ na Nevada kwesịrị ịkwado ntụkwasị obi ahụ. Onye ọ bụla nọ na steeti Nevada kwesịrị ịbụ onye isi nchịkwa ntụkwasị obi.
Nkwado Nchedo Akụ
Rationslọ ọrụ na slọ ọrụ
Ntọala Akaụntụ Bank
Mmemme Ebe E Si Nweta azụmahịa
Anyị na-enye ọtụtụ Nevada
ọrụ yana n'efu
Nchedo akụ na ụba na njikwa dị oke mkpa
Ndị tụkwasịrị obi (gị) nwere ikike dị ukwuu (ọrụ) na ọrụ ntụkwasị obi, ọkachasị maka otu onye na-elekọta ụlọ si ekesara ndị tụkwasịrị ya obi ntụkwasị obi. Younweghị ike inye onye na-elekọta ụlọ ọrụ ka ọ kwụọ onye tụkwasịrị obi ụgwọ oge niile. Ọ bụrụ na ị ga-emeli ya, ọkàikpe nwere ike ịmanye gị iji ikike ahụ nyere ndị iro gị iwu kwadoro. Nwere ike, agbanyeghị, chọọ ịrịọ ka ekesa ndị mmadụ. Na mgbakwunye ị nwere ike ịnwe ikike veto na nkesa ndị ọzọ na-erite uru na ntụkwasị obi. Nke a na-eme ka onye nwere ntụkwasị obi nọrọ oche oche ọkwọ ụgbọ ala n'oge nkesa akụ. Have nwere ogwe aka-ogologo ikike ịmetụta oge na oke nkesa maka onwe gị.
Udo ọzọ nke uche nke etinyere n'ime iwu ndị a bụ ikike onye tụkwasịrị ntụkwasị obi obi ka ọ bụrụ "onye nlekọta ego." Dị ka ndị dị otu a, ịnwere ike iji aka gị jikwaa ma tinye akụ ntụkwasị obi. Akụkụ ọzọ bụ ike iwepu ma dochie onye na-elekọta ụlọ Nevada gị. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịtọpụta etu ntụkwasị obi si kesaa akụ mgbe onye ndozi ahụ gafere site na ihe anyị kpọrọ "ike nhọpụta".
Ogige ntụkwasị obi nke akụ bara ụba dị ọhụụ na US ma ọ bụ naanị steeti ole na ole tinyebere iwu ntụkwasị obi nchekwa akụ. Ọ ọkachamara amatala Nevada dịka ikike azụmaahịa azụmahịa na ụlọ ọrụ nwere mmekọrịta na iwu LLC. Urtslọ ikpe ndị gosipụtarala ịkwado mkpuchi ụlọ ọrụ. Ugbu a, Nevada apụla n'ihu dị ka ikike ụlọ nwere ikike ịhọrọ maka idozi ntụkwasị obi nchebe akụ. Ọ ga-ewe afọ ole na ole tupu iwu ikpe amalite. Agbanyeghị iwu Nevada doro anya na nchebe ha na-enye ntụkwasị obi nchebe ngwa ahịa edoziri nke ọma.
Gịnị kpatara Nevada?
Ekwuru na Nevada na-enye usoro iwu kacha mma maka ịmepụta na ịchekwa ntụkwasị obi nchekwa akụ ụlọ. Na afọ 2010, Nevada tụkwasịrị ntụkwasị obi enwetara ntụkwasị obi nwetara akara A + nke akwụkwọ akụkọ Forbes, nke kacha mma na mba ahụ na naanị steeti akara A + n'ime 13.
Enweghị ụtụ isi ego obodo
Enweghị ụtụ isi ụlọ ọrụ steeti
Iwu kachasị oke nke mmachi na nnyefe ego (afọ 2), nke nwere ike ịdị mkpụmkpụ dị ka ọnwa 6 ma ọ bụrụ na etinyere ya nke ọma
A machibidoro ndị niile ji ụgwọ ụgwọ ịnweta akụ ntụkwasị obi, gụnyere ịkwụ ụgwọ ego, nkwado ụmụaka, ikpe, wdg.
Kachasị pụta ìhè ọkọlọtọ; onye ọ bụla na-akwụ ụgwọ na-agbagha ịnyefe ihe onwunwe ga-enye ihe àmà doro anya ma kwenye nke ebumnuche aghụghọ
Nchedo Akụ nke Obere
Biko buru n'uche, Nevada nchebe ntụkwasị obi bara uru maka ndị bi na Nevada nwere akụ sitere na Nevada. Iwu ikpe anaghị ele anya ma ọ bụrụ na onye bi na steeti ọzọ. Anyị ahụla ndị ọka ikpe na-asị, “Achọghị m ịma ma Nevada nwere ụkpụrụ ndị a. Anyị enweghị ha ebe a na California, New York, wdg. N'ihi ya, m na-enye onye nwe ụlọ iwu ka o nyefee akụ ahụ.
Yabụ, gịnị bụ azịza maka ndị na-abụghị ndị bi na Nevada? Otu nzukọ anyị nwekwara naanị otu “Trigger Trust” nke mba ahụ. Nke ahụ bụ ntụkwasị obi ahụ bụ ntụkwasị obi nchebe akụ nke ụlọ, nke sitere na US ruo mgbe nsogbu iwu dara. Mgbe ahụ ndị nlekọta ahụ kpebiri ime ka ụzọ mgbapụ ahụ gbanwee ma gbanwee ntụkwasị obi ahụ na ngwa ọrụ nchekwa akụ kachasị ike n'ụwa .a ntụkwasị obi Cook Islands. Ndị ọrụ anyị nwere ikike, nkekọ, Cook Islands ụlọ ọrụ iwu karịa usoro dị ka onye na-elekọta ụlọ. Otu onye na-elekọta ụlọ Nevada ga-achọ ịbanye na iwu ụlọ ikpe US. Site na onye na-elekọta mba ọzọ, n'aka nke ọzọ, achọghị ka ha soro iwu nke ụlọ ikpe ala ọzọ, ha nwere ike jụ inyefe onye iro gị iwu.
Ntụkwasị Obi Attorney
Ndị ọka iwu na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi guzobere ntụkwasị obi Nevada. Nwere ike ịkpọ otu n’ime nọmba dị n’elu ma jụọ ajụjụ n’aka ndị ọkachamara ọkachamara anyị ga - enyere aka duzie gị ma zaa ajụjụ gị. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike mezue otu n'ime ụdị ndụmọdụ n'efu. Otu n'ime ndị ọka iwu anyị nwere ike ịme ntụkwasị obi nke ga-enyere gị aka.
Na-ebugharị Atụmatụ Nchedo Akụ Gị
Y’oburu na inwee atumatu nchedo ihe bara uru n’ebe a, ntukwasi obi nke Nevada, ma o bu ka nma, ntụkwasị obi na-akpalite, na-enye ndiiche usoro gi. Lawlọ ọrụ iwu nchekwa kachasị elu n'ụwa kwadoro ka ị gbasaa nchebe akụnụba gị n'ọtụtụ ụgbọ ala nchekwa ngwa ahịa yana n'ọtụtụ iwu nchebe ngwa ahịa. Nke a ga - eme ka onye mmegide iwu gị lụọ ọgụ n'ọtụtụ ihu, na - agbakwunye nnukwu ego na iwu akwụ ụgwọ ịchụ akụnụba gị. Ntụkwasị obi na Nevada ma ọ bụ tụgharịa ntụkwasị obi nwere ike ịja mma maka atụmatụ nchekwa ngwa ahịa ọ bụla, nke dị na mpụga ma ọ bụ nke ụlọ.
Gwa onye ọrụ ahia azụmaahịa Nevada taa, mkparịta ụka na-akwụghị ụgwọ n’oge awa azụmahịa, kpọọ 1-888-444-4412
Emelitere ikpeazụ na June 3, 2019